Hogaamiyaha Zimbabwe oo ku baaqay in midab-kala sooca laga gudbo - BBC News Somali
Image caption Emmerson Mnangagwa ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada madaxtanimo ee dhaceysa 30-ja July
Madaxweynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa ku baaqay midnimo qaran xilli ay doorashada guud ee dalka ka dhaxeysa soo fool leedahay, isaga oo beeraleyda caddaanka u sheegay inaan beerahooda laga qadeyn.
Madaxweynihi hore ee Zimbabwe Robert Mugabe wuxuu taageersanaa dhul beereedka ay boqollaalka caddaanka ah gacanta ku hayaan iney dadka madowga ah kala wareegaamn.
Balse Mr Mnangagwa oo 75 jir ah ayaa Harare kaga dhawaaqay qorshe siyaasadeed oo ka duwan tii uu dalka mudda ku soo dhaqmayey oo ku saabsan dhul beereedka dadka caddaanka ah.
Wuxuuna yiri "waxaan billaabeynaa wadahadallo ku saabsan cidda beeraha yeelaneyso iyada oo midab loo eegin".
"waxaa gaf aad u weyn ah ayuu yiri in beeraley, beeraley madow ah, beeraley caddaan ah la dhaho, waa ineynu dhahnaa beeraleyda Zimbabwe".
Mr Mnangagwa ayaa wuxuu u dhaqaaqay sidi uu u dabcin lahaa arrimaha midab kala sooca si ay dadka caddaanka ah codkooda u siiyaan doorashada taariikhiga ah ee la filayo iney dalka ka dhacdo 30-ka July.
Waa doorashadi ugu horreysay oo dhacda tani iyo inta xilka laga tuuray madaxweynihi hore oo dalka Zimbabwe ka soo arrimin jiray mudda 37 sana ah.
Dadka caddaanka ee Zimbabwe ayaa caada u ah marweliba iney codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka sidA Xisbiga Dhaqdhaqaqa Isbeddel doonka (MDC) oo ka soo horjeeda Xisbiga Mr Mnangagwa ee Zanu PF.
Wuxuuna Mr Mnangagwa sheegay iney dowladdiisa indhaha ka qabsaneyn oo ay aqoonsaneyso sida uu ugu guul darreystay maamulki isaga ka horreyey inuu xalliyo arrinta dhul beereedka.
Caddaanka dhulka haysta iyo dadka madowga ah ayaa waxaa marar badan ka dhex dhacay dagaallo, taasoo ka dhalatay caddaanka sida xirfadeysan wax u beerto iyo shaqa laa'aanta ba'an ee haysata dadka madowga ah oo aan fursado shaqo ka helin dhulka caddaanka.
Beeraleyda acaddaanka ee Zimbabwe
Doorashada bishan dalka Zimbabwe ka dhaceyso waxaa iisu diiwaan geliyey 120 xisbi siyaasadeed iyo 23 musharrax oo u tartameysa kursiga madaxweynanimada oo dqalka oo dhanna laga soo dooranaya.
Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa la saadilanaya inuu doorashada ku guuleysanayao, balse dadka u kuur gala siyaasadda dalkaasi waxay sheegayaan inuu cadow badan uu leeyahay afgambigi uu xilka kaga tuuray madaxweynihi hore iyo doorki awoodeed uu ku lahaa dowladdi hore ee Mugaabe.
Mucaaradka muuqda ee ugu weyn waxaa weeye Nelson Chamisa oo 40 jir ah, ninkani oo ah sharci yaqaan ahna baadari diimeed oo si weyn uga dhex muuqday dib u habeynti lagu sameeyey xisbiga MDC bishi February.
Waana nin sumcad badan bulshada dhexdeeda ku leh, gaar ahaanna mowqifkiisa ku aaddan shaqa la'aanta dhalinyarada, haddii la doortana wuxuu noqonayaa madaxweynaha ugu da'da yar ee dalkaasi hoggaamiyo.
Codka ugu badan ayaa waxaa la filayaa inuu ka helo dhalinyarada dalkaasi. Kala badh iyo in ka badan dadka Zimbaabwe 43.5% waxay da'doodu u dhaxeysaa 25, iyada oo codkiisa uu dhiiban karo ilaa iyo 35 jir.